Iyo iris scanner ichauya kune iyo iPhone gore rinouya | IPhone nhau
Iyo iris scanner iri kuuya ku iPhone gore rinouya
Vazhinji vanga vari vashandisi avo vataura mushure mekudzidza kuti iyo Samsung Cherechedzo 7 yakabatanidza iris scanner, iyo yaive yakapusa, kuti kana isingashande nemagirazi ezuva, kuti kana mune mwenje wakaderera futi, kuti kana ichigere kunyatsogadziriswa… Zvinoita sekudaro Samsung painoburitsa chinhu chitsva chisati chave kuwanikwa pane iyo iPhone, inofanira kutarisirwa pasi. Kune vese avo vashandisi vakatsoropodza kushandiswa kweiyo iris scanner muCherechedzo 7, iwe unofanirwa kuziva kuti inotevera iPhone, inova yegumi yegore, ichabatanidza iris scanner, sezvakataurwa neDitiTimes.
DigiTimes inotaura kuti manyuko enhau idzi anouya kubva kuketani yekugovera. Kare svikiro irori rakataura kuti kusvika kunogoneka kweiyo iris scanner kwaisazosvika kusvika 2018. Zvinotaridza kuti kambani yakafambira mberi zvirongwa kushandisa ino nyowani yekuchengetedza chiyero icho chinowedzeredzwa neTouch ID, nekuti iyi nyowani iris scanner hazvireve kutsakatika kweTouch ID. Iyo iris scanner yakanaka kana isu takabatikana kana kushatisa maoko uye tinofanirwa kushandisa chishandiso.
Asi zvakare iyi iris scanner zvakare inoitendera kuti ishandiswe kusimbisa kubhadhara kuburikidza neApple Pay, sezvatingaite parizvino Kubata ID. Iris yeziso yakaenzana kana kuomarara kupfuura chigunwe chemunwe, ndosaka vagadziri vachiita kunge vari kuda kusarudza iyi yekuchengetedza chiyero icho chinogona kupedzisira chatsiva sensor yeminwe mune ramangwana.
Zvinoenderana naDigiTimes, Xintec, iyo inosangana neApple mugadziri TSMC, ichatanga kugadzirwa kwemazhinji eIris kuziva machipisi mugore ra2017. Iyi nyowani yekuchengetedza chiyero yaizoitwa mumamodeli ayo Cupertino-based kambani inotangisa pamusika gore rinouya. Parizvino isu tirikuda kuti mangani eguhwa rakatenderedza iyo iPhone 7 yakasimbiswa kutanga kutaura nezve iyo iPhone 10 yekuyeukwa, iyo inosvika pamusika gore rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Iyo iris scanner iri kuuya ku iPhone gore rinouya
Android zvakare kutevedzera
Miedzo yekutanga yeSiri yekubatanidza neyechitatu-bato maapplication hainyadzise
Mutsva Etsamba Mameseji Kuuya neIOS 10